Iphrofayili yomphakathi - Iqembu lomhlaba
Ikheli:I-55 Saint-Jean boulevard, i-Suite 600, iPo-Claire, eQuebec, eCanada H9R 5M9
Indawo:EMontreal, eQuebec, eCanada
Ukubuka konke kwenkampani Ukuthenga ikhaya kungenye yezikhathi ezifinyelela kakhulu kumuntu ofuna isiqiniseko nokuqina kulokho okungaba ngumhlaba omatasa. Lokhu kutshalwa kwezimali okuphambili kuyisiqalo seminyaka yokusebenza kanzima, futhi kuholela umuntu esahlukweni esisha ngokuphelele empilweni yabo. Ochwepheshe beReal Real Estate nezezimali obanjelwe kwiLandmark Group bayakuqonda lokhu, futhi sikwenza umthwalo wemfanelo wethu wokunciphisa inqubo yamakhasimende ethu okuthenga ekhaya. Asitholakali kuphela ngaphandle kwamahora ajwayelekile asebhange, kepha singeza ukuthinta okungafani nezinsizakalo ezinikezwayo. Sinikezela ngalezi zinsizakalo ezilandelayo: • Ukuvunywa kwangaphambili • Ukuthengwa kwakho kokuqala kwekhaya • Ukulingana kwempahla yasekhaya ekholini ukuhlanganisa • Imali ehlukile
Umthengisi oxhumana naye
Uhlu lwamuva lomthengisi
I-ejensi Yezezindlu Nezindlu
&nbspMontréal in Québec (Canada), H9R 5M9